I-Chrome 78 Iza ne-DNS ngaphezulu kwe-HTTPS, Ukwenza ngezifiso isithombe ezingemuva nokuningi | Kusuka kuLinux
I-Chrome 78 iza ne-DNS ngaphezulu kwe-HTTPS, ukwenza ngezifiso isithombe sangemuva nokuningi
I-Google isanda kumemezela ukwethulwa kwe- inguqulo entsha yesiphequluli sakho sewebhu I-Google Chrome 78. Kukuyiphi le nguqulo ifaka izakhiwo ze-CSS namanani we-API, i-APIl Uhlelo lwefayela lomdabu nokuthuthukiswa kwemodi emnyama ku-Android naku-iOS.
Ngenkathi eceleni Kusuka kunguqulo yedeskithophu, i-Chrome inenketho entsha yokwakheka ngokwezifison yesikrini esiboniswa lapho kuvulwa ithebhu entsha. Ngokuchofoza inkinobho ethi "Enza ngendlela oyifisayo" ekhoneni elingezansi kwesokudla ekhasini le- "New Tab", uzohlala ukwazi ukufinyelela kugalari lapho ungalanda khona isithombe njengesizinda.
Isiphequluli manje kukuvumela ukuthi ukhethe phakathi kwephalethi yombala wesizinda esiyisicaba noma se-gradient. Futhi ungakhetha izinqamuleli (amasayithi avela kubha yokusesha ye-Google) ngesandla noma uvumele i-Chrome ikhethe ngokuya ngemikhuba yokuphequlula yomsebenzisi.
Enye into entsha efakwe kunguqulo yedeskithophu ye-Chrome 78 yilokho manje usunokuqinisekiswa kwephasiwedi okwakhelwe ngaphakathi. Leli thuluzi lihlola ngqo iziqinisekiso namaphasiwedi agcinwe ku-akhawunti ye-Google. Uma iphasiwedi yonakalisiwe, isiphequluli sizokucela ukuthi uyishintshe.
Ohlangothini lomsebenzi kubathuthukisi bewebhu, imisebenzi inwetshiwe, kahle ibhodi manje selingasetshenziswa lihlanganiswe neminye imisebenzi, ukuvimba kanjani izicelo nokukhansela ukulandwa. Ngaphezu kokusekelwa okungeziwe kwamaprosesa wokukhokha amaphutha ngokusebenzisa i-API yokukhokha nakho kuqokonyisiwe. Amathegi we-LCP angeziwe kuphaneli lokuhlaziya ukusebenza.
Uhlobo lwebhizinisi lwe-Chrome futhi izinzuzo zokuhlanganiswa kwe-Google Drayivu. Kubha yekheli le-Chrome, kUzothola amafayela we-Google Drayivu okwazi ukufinyelela kuwo. Futhi, uma ungaboni noma iyiphi yalezi zinketho ku-Chrome 78.
Izinguquko eziningi ku-Chrome 78 ye-Android zehlela entweni eyodwa: “Itimu emnyama yamamenyu we-Chrome, izilungiselelo nezindawo. Ithole kuzilungiselelo> Izindikimba.
I-Chrome 78 ibuye ifake ezinye izici ezikhula kancane kancane. Isibonelo, abasebenzisi be-Chrome maduzane bazokwazi ukugqamisa isixhumanisi senombolo yefoni ku-Chrome, chofoza ngakwesokudla, futhi badlulisele ikholi kudivayisi yabo ye-Android.
Abanye abasebenzisi Bangabona futhi inketho yokwabelana ngokuqukethwe kwabo kokunamathisela phakathi kwamakhompyutha abo namadivayisi we-Android. Ukwabelana ngebhodi lokunamathisela kudinga ukuthi i-Chrome ixhumeke kuwo womabili amadivayisi ane-akhawunti efanayo futhi i-Chrome Sync inikwe amandla. I-Google ikhombisa ukuthi umbhalo ubethelwe ukuphela kokugcina nokuthi ibhizinisi alikwazi ukubona okuqukethwe.
Ekugcineni uma ufuna ukwazi kabanzi ngemininingwane yalokhu kwethulwa okusha kwesiphequluli. Ungahlola isixhumanisi esilandelayo.
Ungayifaka kanjani iGoogle Chrome 78 kuLinux?
Kulabo abanentshisekelo yokukwazi ukufaka isiphequluli kuzinhlelo zabo, bangakwenza lokho ngokulandela imiyalo esabelana ngayo ngezansi.
Endabeni yalabo abasebenzisi be-Ubuntu, i-Debian, i-Fedora, i-RHEl, i-CentOS noma enye into etholakala kulokhu. Sizoya ekhasini lewebhu lesiphequluli ukuthola iphakethe le-deb noma le-rmp (njengoba kungenzeka) ukwazi ukuyifaka ohlelweni lwethu ngosizo lomphathi wephakheji noma kusuka ku-terminal. Isixhumanisi yilokhu.
Lapho iphakethe selitholakele (uma kwenzeka ama-distros asebenzisa amaphakheji wedebhu) kufanele sifake kuphela ngomyalo olandelayo:
Ngenkathi kwenzeka kulabo abasebenzisa amaphakheji we-rpm kufanele sithayiphe okulandelayo:
Manje kulabo abangabasebenzisi be-Arch Linux nanoma ikuphi okunye okuvela kukho, ukufakwa kwenziwa kwizinqolobane ze-AUR ngomyalo olandelayo:
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » Aplicaciones » I-Chrome 78 iza ne-DNS ngaphezulu kwe-HTTPS, ukwenza ngezifiso isithombe sangemuva nokuningi
Uhlobo olusha lweMirageOS 3.6 manje seluyatholakala ngokuthuthuka okuhlukahlukene kweSolo5